အိန္ဒိယတွင် ကမ္ဘာကြီး ပိုမိုပူနွေးစေနိုင်သည့် လေအေးပေးစက် အသုံးပြုမှုအဆမတန် များပြားလာမည်ဟု - Yangon Media Group
သို့သော် နွေရာသီကာလ များတွင် လူသေဆုံးမှုရှိသည် အထိ ပြင်းထန်သော အပူဒဏ် ကို ကြံ့ကြံ့ခံ နေရသည့်သန်းနှင့်ချီ သော အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ အ တွက် လေအေးပေးစက်များ သည် ဘုရား၏လက်ဆောင်မွန် ဟု ယူဆထားကြသည်။ ပူလောင် သည့် သဲကန္တာရအတွင်း ရှိသည့် ရာဂျစ်စတန်ပြည်နယ်၊ ဘီဟာ မြို့မှ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် ကူမာက ”နွေရာသီတွေဟာ ကျွန် တော်တို့ရဲ့ဘဝကို စိတ်ဒုက္ခရောက် စေပါတယ်။ တစ်နေ့တာ ပင်ပင် ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နာရီနည်းနည်းလေးပဲ အိပ်ရတာ ဟာခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်။ ကျွန် တော် မချမ်းသာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ သက် သောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ ဘဝကို ပိုမိုလိုလားကြပါတယ်” ဟု ပြော ဆိုထားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်၏ အကြီးဆုံးမြစ်လက်တက်ဖြစ်သော ချင်းတွင်းမြစ် ကယ်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် မုံရွာမြ?
ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးသည့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ပြည်သူများ၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို လျှော့ချ??